माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादीको अध्ययन पद्वति::Online News Portal from State No. 4
अध्ययन भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । अध्ययन ज्ञान प्राप्तीको साधन हो । वास्तवमा विगतका ज्ञानहरूलाई बुझ्ने र वर्तमानलाई विश्लेषण गरी ज्ञानको अद्यावधिक गर्नुलाई अध्ययन भनिन्छ । अतः मानिसले अध्ययनकै माध्यमबाट विगतलाई बुझ्दछ, वर्तमानलाई मूल्याङ्कन गर्दछ र भविष्यको निर्धारण गर्दछ । विगतका अनुभवहरू, अतीतका अभिलेख वा संस्मरणबाट सिक्ने पद्धति हो, जुन अध्ययनबाट अनुसन्धान गरी व्यवस्थित रूपमा ज्ञान प्राप्त गरिन्छ, त्यसलाई बैज्ञानिक अध्ययन भनिन्छ ।
एउटा कुरा के हो भने समाज विकासका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव क्रियाकलाप, सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता, प्रणालीहरू, तौरतरिकाहरूको अध्ययन सामाजिक अध्ययनमा गनिन्छन् भने प्रकृति र भौतिक नियमको अध्ययन विज्ञानमा हुने गर्दछ । अध्ययनले कार्य र कारण बिचको सम्बन्ध र यसबाट प्राप्त हुने परिणामको आँङ्कलन गर्दछ । अध्ययन प्रणालीमा वैज्ञानिक विधिको अध्ययनबाट विज्ञानसम्मत अध्ययन गरिन्छ । यसमा कार्यकरण सम्बन्ध र नियमहरू अनतरसंबन्ध र यसमा आउने परिणामका नियम आदिको वैज्ञानिक विधिबाट अध्ययन गरिन्छ भने दोस्रो तरिकामा कल्पना र विचारका आधारमा निरपेक्ष अध्ययन गरिन्छ । यस पद्धति, प्रमाण वस्तुगत यथार्थमा आधारित नभई कल्पना र विचारको श्रृङ्खलाको आधारमा निचोड निकाल्ने गरिन्छ । यो आदर्शवादी काल्पनिक अध्ययन पद्धति हो । यो आत्मगत चिन्तन भएकाले यसको सम्बन्ध वस्तुगत यथार्थसँग हुँदैन । वैज्ञानिक अध्ययनमा द्वन्द्वात्मक नियमलाई माक्र्सवादले अपनाएको छ भने आदर्शवादी अध्ययनले अज्ञेयवादलाई मूल आधार बनाएको हुन्छ । आधुनिक अध्ययन पद्धतिमा वर्तमानमा वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतिलाई मात्र आधारित र प्रमाणित अध्ययन पद्धतिको रूपमा मानिएको छ । राजनीतिक अध्ययनको परम्परा पद्धतिमा दार्शनिक अध्ययन विधि, ऐतिहासिक अध्ययन विधि, तुलनात्मक अध्ययनविधि, वैध अध्ययनविधि, संस्थागत अध्ययन विधि, प्रर्पवेक्षानात्मक अध्ययन विधि आदि रहेका छन् । माक्र्सवादी पद्धतिले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति अपनाएको छ । अध्ययनका क्षेत्रमा विज्ञानसम्मत रहेको माक्र्सवादी पद्धतिले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति अपनाउने भएकोले यस लेखमा आज माक्र्सवादले दोस्रो चरणमा लेनिनवादमा र तेस्रो र नयाँ चरणमा माओवादमा विकास गरि सकेको छ, आजको साम्राज्यवाद र सर्वहातवर्ग बिचको भीषण वर्गसंघर्षको युगमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको अध्ययनको पद्धतिका बारेमा आफ्नो विचार राख्न प्रयत्न गरिएको छ ।
विषयवस्तु बारे :
माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद आज विश्व सर्वहारावर्गको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई ग्रहण नगरिकन, यसलाई आत्मसक्तिकरण नगरिकन र जीवन व्यवहारमा प्रयोग नगरेसम्म कोही पनि सच्चा क्रान्तिकारी बन्न सक्तैन भन्ने कुरा आजको व्यवहारद्वारा पुष्टि भइसकेको छ । अतः आजका माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूले र नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको अध्ययन किन आवश्यक छ ? र यसको अध्ययन कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नको महत्वपूर्ण विषय बन्न गएको छ । आज हामी माओवादी क्रान्तिकारीहरूका बिचमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको गहन अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने प्रवृत्ति समाप्तै भएर गएको छ । अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा आदर्शको साँघुरो घेराभित्र सिमित हुन पुगेको छ । यो ज्यादै गलत चिन्तन र प्रवृत्ति हो । अर्कोतिर हामीसँग सबै कुरा जानी सकेका छौं भन्ने अहंकार पनि छ ।
हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक मुलुक जहाँ कि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने काम नै बाँकी छ । वैज्ञानिक समाजवाद हुदै साम्यवादसम्म पुग्ने यात्रा त निकै नै टाढाको विषय हो । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका नेपाली सर्वहारावर्गका नेता, कार्यकताहरू विशेष गरि क्रान्तिकारी माओवादीका नेता, कार्यकर्ताहरूले त झनै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विशेष प्रकारले अध्ययन गर्न र त्यसलाई जीवन व्यवहारमा उतार्न अति जरूरी छ । जीवन व्यवहारमा उतार्ने भनेको वर्गसंघर्षमा प्रतिबद्ध भएर सरिक हुने भनिएको हो । संसार बदल्ने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ प्रतिबद्ध भएर लामबद्ध भएका क्रान्तिकारीहरूले आजको वर्तमान विश्वलाई बुझ्न र अध्ययन– विश्लेषण गर्न जरूरी छ । वर्तमान संसारको बारेमा वास्तविक धरातलमा उभिएर अध्ययन नगरिकन ठोस विश्लेषण गर्न असम्भव हुन्छ । अतः संसारको अध्ययन गर्र्ने, त्यसको ठोस विश्लेषण गर्न र त्यसलाई बदल्ने नियमलाई बुझ्नका लागि वैज्ञानिक अध्ययन माक्र्सवाद हो ।
माक्र्सवाद एक वैज्ञानिक सिद्धान्त हो र माक्र्सवाद सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान हो । माक्र्सवाद सर्वहारावर्गको मुक्तिको सिद्धान्त र विश्वदृष्टिकोण हो । कमरेड मोहन वैद्य ‘किरण’ अगाडि लेख्नुहुन्छ– “माक्र्सवाद पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा विकसित भएको हो । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, वर्गसंघर्ष तथा इतिहासिमा बलप्रयोगको भूमिका र वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद माक्र्सवादका आधारभूत मान्यता हुन् । माक्र्सवादी दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन हो । माक्र्सवादी दर्शनको सिद्धान्त भौतिकवाद हो । यसले पदार्थ, प्रकृति वा सामाजक सत्तालाई पहिलो र चेतना, विचार वा सामाजिक चेतनालाई दोस्रो स्थानमा राख्दछ । माक्र्सवादी दर्शनले चेतनालाई वस्तुगत जगतको आत्मिक प्रतिबिम्बन मान्दछ र विश्वलाई बोधगम्य बताउँदछ । माक्र्सवादी दर्शनको पद्धति द्वन्द्ववाद हो ।” (३)
माक्र्सवाद एक परिवर्तनशील सिद्धान्त हो । यो देश, काल, परिस्थिति अनुसार अर्थात् ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा सिर्जनात्मक रुपमा विकास र प्रयोग हुँदै आएको छ । माक्र्सवादले आज माक्र्सवादको गुणात्मक विकासको दोस्रो चरण लेनिनवाद र माक्र्सवाद–लेनिनवादको विकासको तेस्रो र नयाँ चरण माओवादमा विकास गरिसकेको छ । यसरी आज अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्गको हातमा एउटा सार्वभौम सिद्धान्तको सिंगो अभेद्य इकाइको रुपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद रहेको छ र मालेमावादको ज्ञानभण्डार असीमित छ । अतः यसको वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति अर्थात् द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको पद्धतिको दायराभित्र रहेर गर्न जरुरी छ । यो पद्धतिभन्दा बाहिरबाट गरिने अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मानिँदैन र अधिभूतवादी अध्ययन पद्धतिमा पुग्दछ ।
मालेमावादको अध्ययनको पद्धति ः माक्र्सवाद के हो ? यसको जन्म र विकास कसरी भयो ? लेनिनवाद के हो ? माओवाद के हो ? मालेमाओवादको किन आवश्यकता छ ? आदि विषयमा माथि उल्लेख गरिएको छ । यहाँ माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको अध्ययनको पद्धति के हो ? हामीले मालेमावादको अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
अध्ययन भनेको ज्ञानप्राप्तिको साधन हो । कुनैपनि वस्तुको अध्ययन विना त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिदैन । मानिसले अध्ययनकै माध्यमबाट विगतलाई बुझ्दछ, वर्तमानलाई मूल्याङ्कन गर्दछ र भविष्यको निर्धारण गर्दछ । विगतका ज्ञानहरूलाई बुझ्ने र वर्तमानलाई विश्लेषण गरि ज्ञानको अद्यावधिक गर्नुलाई अध्ययन भनिन्छ । कल्पना र विचारका आधारमा निरपेक्ष अध्ययन गरिन्छ, जसबाट प्रमाण र वस्तुगत यथार्थमा आधारित नभई कल्पना र विचारको श्रृङ्खलाको आधारमा निचोड निकालिने गरिन्छ यस पद्धतिलाई आदर्शवादी (काल्पनिक) पद्धति भनिन्छ । यो पद्धति आत्मपरक चिन्तन हो । यसको सम्बन्ध वस्तुगत यथार्थसँग हुदैन, कोरा काल्पनिक ईश्वरीय चिन्तन प्रणालीसीत सम्बन्धित हुन्छ । यो जे गर्दछन् सबै ईश्वरले गर्दछन् भन्ने चिन्तनशील सम्बन्धित हुन्छ । आदर्शवादी (काल्पनीक) अद्वैतवादीलाई मूल आधार बनाएको छ ।
द्वन्द्ववाद भनेको विश्व ब्रम्हाण्डमका सारा चीजहरू दुई परस्पर विरोधी तत्व वा कुरा मिलेर बनेका हुन्छन् । तातो र चिसो, हलुङ्गो र गह्रुङ्गो, उल्टो र सुल्टो, झुटो र साँचो, तान्नु र घचेट्नु, धन र ऋण, धनी र गरिब जस्ता उल्टा–उल्टा स्वभाव भएका कुरालाई परस्पर विरोधी कुरा भनिन्छ । तातो नभई चिसो र ऋण नभई धन हुन सक्दैन । त्यसैले संसारमा जहाँ पनि विरोधी कुराहरू सँगसँगै गाँसिएका हुन्छन् । यस रूपमा विश्व स्वसञ्चालित छ भनी सावित गर्ने वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई द्वन्द्वबाट भनिन्छ । संसारका सबै कुराभित्र आपसी द्वन्द्व (संघर्ष वा टक्कर) चलिरहेको हुन्छ । यस्तो द्वन्द्वले नै हरेक कुराको जीवन (अस्तित्व) बनेको र हरेक कुरा गतिशिल, विकासशील र परिवर्तनशील छन् । स्थिर वा सधैं एकनास रहने कुरा संसारमा केही छैन । सारा संसारको स्वभाव (प्रकृति) नै द्वन्द्वात्मक छ । संसारको सृष्टि स्थिति तय गर्ने शक्ति ईश्वर नभएर वस्तुभित्रकै स्वभाव हुनाले संसार स्वचालित छ । अतः संसार (विश्व ब्रम्हाण्ड) द्वन्द्वात्मक छ । यही द्वन्द्वात्मकताको सिद्धान्तलाई द्वन्द्ववाद भनिन्छ । माक्र्सवाद के हो ? लेनिनवाद के हो ? माओवाद के हो ? भन्ने बारेमा माथि नै सप्रमाण पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । साथै अध्ययनका क्षेत्रमा आदर्शवादी (काल्पनिक) अध्ययन पद्धति र वैज्ञानिक (द्वन्द्वात्मक) पद्धतिका बारेमा पनि माथि सक्दो चर्चा गरिएको छ । द्वन्द्वात्मक के हो ? द्वन्द्वात्मक के हो ? आदिबारे पनि माथि नै उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको के हो भने हामी माक्र्सवादी–लेनिनवादी– माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको अध्ययनको वैज्ञानिक (द्वन्द्वात्मक) पद्धित भएकाले हामीले यही वैज्ञानिक (द्वन्द्वात्मक) पद्धति र विधि तथा तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, यो भन्दा बाहिरबाट अध्ययन गर्ने पद्धति अपनायौं भनेृ त्यो पद्धति मनोगतवादी अर्थात अधिभूतवादी पद्धति हुन जान्छ । यस विषयमा हामी होसियार हुन आवश्यक छ भन्ने नै हो । दर्शन भनेको अर्थात् माक्र्सवादी दर्शन भनेको संसारलाई जस्ताको तस्तै गरेर बुझ्ने, त्यसको अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा गर्ने र त्यसलाई बदल्ने रहेको छ । त्यसो भएर संसारलाई बुझ्ने र बदल्ने बारेमा कार्लमाक्र्स अगाडि भन्नु हुन्छ ः “संसारको व्याख्या त सबैले गरेका छन्, गाठी कुरो त त्यसलाई बदल्नु पो हो त ।” –
मालेमावादको अध्ययन गर्ने अन्य धेरै हुन सक्छन् । तीमध्ये यहाँ मूलतः दुईवटा तरिकाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तै ः
(२२ अग्रष्टमा इमेलबाट प्राप्त भएको हस्तबहादुर केसीको लेखको बाँकी अंश अर्काे शनिबार प्रकाशित हुने जानकारी गराइन्छ ।)